Nepal Deep | जब्बर जबरा: आज एक्लै मुद्धा हेरे, राजीनामा नदिने चट्टानी अडानमा यथावत !
जब्बर जबरा: आज एक्लै मुद्धा हेरे, राजीनामा नदिने चट्टानी अडानमा यथावत !
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आज एक्लै मुद्धा हेरेका छन्। सहकर्मी न्यायधीशहरुको अस्वाभाविक घेराबन्दीमा परेका प्रधानन्यायधीश जबराले बुधबार पाँचवटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आदेशसमेत जारी गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बुधबारका लागि सर्वोच्च अदालतमा ११ इजालास तोकेका थिए। त्यहीमध्ये आफ्नो एकल इजलासबाट उनले उक्त पाँच मुद्दाको आदेश जारी गरेका हुन्। ​जबराले एउटा मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश, एउटामा निवेदन फिर्ता, दुइटामा कारण देखाउ आदेश र एउटामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेका हुन्। उनले न्यायबाट कोही बन्चित नहुने भन्दै भोलि पनि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइ हुने बताए।
जबराले आफूसहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ लगायत पाँच जनाको पूर्ण इजलास तोकेका थिए। तर संवैधानिक इजलास भने अरू न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशबारे धारणा बनाउन छलफल गर्न जुटेकाले बस्न सकेन। उनीहरूले हिजो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका थिए।
बुधबार पाँचवटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आदेशसमेत जारी गरेर इजलासबाट उठ्दै उनले आफूले मुद्धा हेर्न नछोड्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो कुरा भोलि राख्ने पनि बताए। उनले भने, ‘मुद्दा हेर्न छाड्दिनँ, मेरा कुरा भोलि राख्छु।’
बुधबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधनका कारण शोकमा रहेकाले अहिले देखिएका विवाद र प्रश्नबारे केही नबोल्ने उनले बताए। ‘सर्वोच्चका न्यायाशीशको मृत्युले शोकमा भएकाले आज केही भन्दिनँ, मेरा सबै कुरा भोलि राख्छु,’ राणाले भने।
मंगलबार न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र त्यही प्रक्रियाबाट जान तयार रहेको बताएका थिए। प्रश्न उठेका सबैले सामूहिक राजीनामा दिने भए आफू तयार रहेको जवाफ दिएपछि न्यायधीशहरु नै के गर्ने भन्नेमा पुगेका थिए। कसैले सडकबाट माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने राणाको अडान सुनेपछि न्यायाधीशहरूले थप छलफल गरेका थिए। उनीहरूले यसबारे आज पनि छलफल गर्दै छन्। पछिल्लो दुई दिनदेखि राणाले तोकेको इजलासमा नबसेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बुधबार पनि इजलास बहिस्कार गरेका हुन्।
सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै,आज तोलाको कति घट्यो ?